laacib » Mourinho Oo Ku Tilmaamay Guushii Man City Mid Nasiib Ah Isagoo Ku Dooday In Rogoore Cad Kooxdiisa Laga Beeniyay & Pep Guardiola Oo U Jawaabay
Mourinho Oo Ku Tilmaamay Guushii Man City Mid Nasiib Ah Isagoo Ku Dooday In Rogoore Cad Kooxdiisa Laga Beeniyay & Pep Guardiola Oo U Jawaabay
Jose Mourinho ayaa ku tilmaamay Manchester City koox nasiib badan iyadoo laacibkii Pep Guardiola ay 11 dhibcood ku qabteen hogaanka horyaalka Premier League.
Mourinho ayaa si weyn uga careysnaa in garsoore Michael Oliver uusan United u dhigin rigoore markii Andre Herrera uu ku dhex dhacay xerada ganaaxa isagoo ay kubada ku dagaalamayeen Nicolas Otamendi waxaana markaas ciyaarta ka harsaneyd 11 daqiiqo laakiin bedelkii Herrera rigoore loo dhigi lahaa garsooraha ayaa xiddiga reer Spain caalamada hurdiga ku siiyay inuu istuuray.
Goolal ka kala yimid David Silva iyo Nicolas Otamendi ayaa City ka caawiyay inay guul ka gaaraan Man United kuwaasoo goolkooda qura uu dhaliyay Marcus Rashford, laacibkii Pep Guardiola ayaana ciyaarta iska heysatay iyagoo xilli ciyaareedkii labaad ee isku xigta ku badinaya Old Trafford.
Laakiin Mourinho ayaa ahaa mid ka careysan rigoorada laga diiday kooxdiisa iyadoo City ay badisay kulankii 14aad ee isku xigta ee Premier League taasoo rikoor ah, waxaana ay soo gabagabeeyeen 40 kulan oo aan Man United looga badinin gurigooda.
“Garsoore Michael Oliver si fiican ayuu u qabtay ciyaarta laakiin waxa uu sameeyay hal qalad muhim ahaa” ayuu yiri Mourinho.
“Natiijada ciyaarta waxa ay ku timid iyadoo rigoore iska cad aan la dhigin. Ciyaarta waxa ay noqon laheyd 2-2 iyadoo 10 daqiiqo ay ka harsan tahay. Garsoore Michael nasiibdarro ayay ku aheyd go’aankiisa sababtoo ah waxa ay aheyd rigoore cad.
“City waa koox aad u fiican laakiin waxaan qabaa inay nasiib badan yihiin. Waxaa ilaalinaya nasiibka. Dhamaan go’aanada garsoore oo dhan dhankooda ayuu u janjeeraa.
“Waxaan ka hadli karnaa wax walba oo aad rabo, waxaad igala hadli kartaa falsafada kubada cagta, waxaad igala hadli kartaa xaqiiqooyinka ciyaarta, waxaad xitaa miiska soo saari kartaa kubad-heysashada, waxaad la imaan kartaa wax walba aad rabto, laakiin sidii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay rigoore weyn oo muhim u noqon laheyd natiijada ciyaarta la diiday.”
Hadalka Mourinho ayaa keentay in Guardiola uu bixiyo jawaab culus isagoo yiri: “Aniga ahaan ilama aheyn rigoore, sababtoo ah ujeedada Otamendi ma aheyn inuu dhulka dhigo.
“Marka ay koox leedahay geesinimada ay kubada ku heysato boqolkiiba 65 waxa ay ku tusineysaa inay doonayaan inay ciyaaraan, waana taas waxaan sameynay. Waxaan aheyn kuwa furan, waxaan aheyn daacad, waxaan dooneynay inaan weerar qaadno.
“Kooxda kale waxa ay sameyn kartaa wixii aay doonaan. Waan badinay sababtoo ah waxaan aheyn laacibkii fiican.
“Bisha December laguma guuleysto horyaalka. Waan arki doonaa booska aan ku jirno marka la gaaro March iyo April laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan 14 kulan oo isku xigta badinay.”
Markii la weydiiyay haddii tartanka horyalaka uu soo dhamaaday, Mourinho ayaa isna ku jawaabay: “Haa, sidaas ayay u badan tahay. Waxaan hubaa in dhamaanteen – labaad, seddexaad, afaraad, shanaad iyo lixaaad= inaan u dagaalami doono dhibco si aan u soo yareyno farqiga, laakiin faa’idada ay heystaan waa mid aad u fiican.”